Izindiza zezindiza zaseRussia zisuse ukwethula izindiza eziya ezindaweni zokungcebeleka oLwandle Olubomvu eSharm El Sheikh naseHurghada
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Russia Breaking News » Izindiza zezindiza zaseRussia zisuse ukwethula izindiza eziya ezindaweni zokungcebeleka oLwandle Olubomvu eSharm El Sheikh naseHurghada
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • IGibhithe Izindaba Ezintsha • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • I-Russia Breaking News • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Izindiza ezindiza i-Aeroflot nezakwa-S7 zizokwethula izindiza ezisuka eMoscow, iRossiya, esivele indizela eGibhithe, zizokwenyusa ubude bezindiza. Ural Airlines, Azur air, Nordwind, Ikar, Red Wings, S7, kanye neYamal bazokwethula izindiza ezivela esifundeni.
Umlawuli wezindiza waseRussia ugunyaza inkampani yezindiza eziyi-9 ukuthi yethule izindiza zokungcebeleka zase-Egypt.
Izindiza ezihleliwe eziya eHurghada naseSharm El Sheik ukwethula ngesonto noma amabili.
Izindiza zizodinga okungenani isonto ukwethula ukuthengisa nokwenza inethiwekhi yezindiza.
I-Federal Air Transport Agency yaseRussia imemezele namuhla ukuthi abathwali bomoya abayi-9 baseRussia bazogunyazwa ukuqala izindiza ezihleliwe ezisuka eRussia ziye ezindaweni zokungcebeleka zoLwandle Olubomvu zaseGibhithe zaseHurghada naseSharm El Sheikh.
“Izindiza zizonikezwa ilungelo lokusebenzisa indiza eyodwa ngesonto emzileni ngamunye oya eHurghada naseSharm EL Sheikh. Futhi emizileni eMoscow - eHurghada naseMoscow - eSharm El Sheikh, inani lezindiza lenyuka lisuka ezi-5 liye kwezingu-15 ngesonto, ”kusho umlawuli wezindiza waseRussia.
Aeroflot futhi izindiza ze-S7 zizokwethula izindiza ezivela eMoscow, Rossiya, esivele indizela eGibhithe, izokwandisa imvamisa yezindiza. Ural Airlines, Azur air, Nordwind, Ikar, Red Wings, S7, kanye neYamal bazokwethula izindiza ezivela ezifundeni.
Kodwa-ke, izindiza zaseRussia zizodinga okungenani isonto ukwethula izindiza ezintsha eziya e-Egypt. Abathwali bazodinga isikhathi sokuqalisa ukuthengisa nokwakha inethiwekhi yezindiza.
"Izindiza zaseRussia ngeke zivule izindiza ezintsha eziya e-Egypt kungekudala, ama-quota asatshalaliswe izolo kuphela - abathwali bezimoto bazodinga okungenani isonto ukuqala ukuthengisa nokwenza uhlelo," kusho isikhulu salesi sikhungo.
Kanye nokuphakamisa ukukhuphula inani lezindiza ezijwayelekile eziya e-Egypt, i-Russian Federal Air Transport Agency nayo ikhuthaza ukuqala kwezindiza ezindiza ezweni.
"Le nhlangano isebenzisana neziphathimandla zezinhlangano ezizimisele ukuletha iziphakamiso ekomkhulu lezisebenzi ukuze kwandiswe isibalo sezindiza ezijwayelekile zokuqasha emadolobheni aseGibhithe, eMoscow nakwezinye izifunda zezwe," kusho isitatimende sale nhlangano. .